RGB အလင်းများ RGB အလင်းများ မှထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊
SHINYU LIGHT CO., LTD. နာမည်ဂုဏ်သတင်းကျော်ဇောထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူဖြစ်ပါသည် RGB အလင်းများ, စက်ရုံ Taiwan။ အခွက်အမျိုးမျိုးကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်း၏အခြေခံတွင်, စဉ်ဆက်မပြတ်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့်တိုးတက်ကောင်းမွန်ရေးအရည်အသွေး၌စိတ်ဝိညာဉ်အား, ဖောက်သည်များ၏တောင်းဆိုမှုခရီးဦးကြိုပြုခြင်းကျွန်တော်တို့၏အကွယ်အကာအဖြစ်ကြည်ဖြူနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံအရည်အသွေးကောင်းထုတ်ကုန်များကိုပေး, ဒီဇိုင်း, ထုတ်လုပ်မှုနှင့် delivery ၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်အရည်အသွေးကထိန်းချုပ်ထားသည် တိုင်းဖောက်သည်များအတွက်။ ကျနော်တို့စဉ်ဆက်မပြတ်အလွန်ကောင်းမွန်သောအရည်အသွေး, နာမည်ကောင်းကိုစောင့်ပါမည်။ ပြည်တွင်းနှင့် overseas'friends ထံမှအဖိုးတန်အကြံဥာဏ်များနှင့်အကြံပြုချက်များကိုခံယူခြင်းငှါမျှော်လင့်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကိုဒီပူပွဲချင်းပြီး၌ကောင်းသောအောင်မြင်မှုများကိုဖန်တီးရန်နှင့်အတူတကွanice မနက်ဖြန်ထွက်မသွားပါစေနှင့်။
ပုံစံ - U4 RGB 56°/ 95° 60-150W
RGB အလင်းရောင်စီးရီးကိုအိမ်တွင်းနှင့်ပြင်ပပတ် ၀ န်းကျင်များတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်:ထိုကဲ့သို့သောဥယျာဉ်ရှုခင်းများအဖြစ်ရှုခင်းများ,ပန်းခြံရှုခင်းများ,ကခုန်ခန်းမများ,မင်္ဂလာဆောင်ပွဲ,စသည်တို့.
အချိုးကျမှန်ဘီလူးပုံစံ(Beam ထောင့်:၁၅.56.95.98X132 ဒီဂရီ).
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.ledlightfixtures.org/my/rgb-lights.html
အကောင်းဆုံး RGB အလင်းများ ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက်သင်သည် RGB အလင်းများ မှထုတ်လုပ်သော၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ရုံ